Isinyathelo esisodwa ukusuka esihogweni - Boys Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Isinyathelo esisodwa kusuka esihogweni Isilinganiso 4.5 / 5 koku 18
I-N / A, inokubukwa okungu-35.7K
Fantasy, UManhwa, Romance, yaboi
“Uma ungamdingi uNkulunkulu… kuthiwani ngosathane?”
Ukunyenyeza kwensindiso kasathane enikeza isilingo esimnandi enganeni ebalekela ukuhlukunyezwa.
“Yenza isivumelwano nami, futhi uma kuyisifiso sakho, ngizokunikeza izifiso ezintathu.”
Igembula impilo yengane ephunyuke ekuhlukunyezweni ngesivumelwano sikadeveli, ingane ibalekela udeveli ngokuphepha futhi iqale impilo entsha ngaphansi kwegama elithi Daniel Barton.
Ngemva kweminyaka, uDaniel, manje osekhulile, wazithola esendleleni eya emsebenzini. Nokho, ngaphambili kweWashington Hotel kwakumi indoda ebukekayo—
Ungathola okuningi amahlaya anqunu
Isahluko 8 Mashi 24, 2021
UMahira Ga Kuru
Idayari Yokuzijabulisa Neyinkinga
Baillie Futhi Izipoki
IHoozuki-San Chi No Aneki